Ifulethi elinabantu abangu-2, - I-Airbnb
Ifulethi elinabantu abangu-2,
Workum, Friesland, i-Netherlands
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Pieter
Ukubuka okuhle phezu kwezimfunda!
Ifulethi elisha ngokuphelele leholide labantu abangu-2, eliphakathi kwamadolobha amabili eFrisian eleven eWorkum naseHindeloopen. Ifulethi libheke izimfunda ezibheke e-Hindeloopen futhi linikeza isisekelo sokuhlala izinsuku eziningi eFriesland enhle.
Ifulethi lingaphakathi kwebanga lokuhamba ngebhayisikili lezindawo ezinhle kakhulu eSouthwest Friesland. Ungakwazi futhi ukujabulela amahlathi aseGaasterland noma ujikeleze amachibi amahle aseFrisian.
Ifulethi lixhumene nekhaya labanikazi bezindlu futhi linendawo yalo yokungena kanye nethala.
Igumbi lokuhlala elikhanyayo lefulethi lineminyango eshelelayo enikeza ukufinyelela kuthala elinezihlalo, i-parasol kanye nama-recliner amabili.
Ikhishi lifakwe isiqandisi, umshini wokuwasha izitsha, uhhavini kanye nehobhu kagesi. Kukhona neketela nomshini wekhofi we-Nespresso. Izinkomishi zekhofi, itiye kanye nezinsiza kuyatholakala efulethini. Kanye nezindwangu zasekhishini (amathawula etiye, amathawula ekhishi nezindwangu), amaphilisi okugeza izitsha, uketshezi oluwasha, insipho yezandla, izikhwama zikadoti, upelepele, usawoti namafutha omnqumo.
Indlu yokugezela ineshawa yemvula, usinki obanzi kanye nendlu yangasese. Kuhlinzekwa amathawula, iphepha lasendlini yangasese kanye nokomisa izinwele.
Ikamelo lokulala lisezingeni eliphezulu. Imibhede (amabhokisi angu-2 emibhede yasentwasahlobo engu-90x210 cm) yenziwa lapho ifika. Uma uthanda, singakubeka imibhede njengemibhede emibili ehlukene ekamelweni lakho.
Izilwane ezifuywayo kanye nokubhema akuvunyelwe efulethini.
ubusuku obungu-7 e- Workum
Ifulethi litholakala phakathi kwe-Workum ne-Hindeloopen, womabili ama-3 km ngebhayisikili.
Lapho ufika sizokunikeza ukuvakasha kwefulethi futhi sikutshele ngemisebenzi kanye nezindlela ezinhle zamabhayisikili nokuhamba ngezinyawo endaweni. Ngesikhathi sokuhlala kwakho siyatholakala kuyo yonke imibuzo yakho nolwazi.
Hlola ezinye izinketho ezise- Workum namaphethelo